Tsara Vintana Aho Manana Pasipaoro Siriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Oktobra 2016 15:43 GMT
sary: Sehatra ho an'ny daholobe, avy tamin'i Pixabay.
Ampahanà andiany manokana amin'ireo lahatsoratra avy tamin'ny mpitoraka blaogy sady mpikatroka mafana fo, Marcell Shehwaro, ity lahatsoratra ity, milazalaza ireo tena miseho amin'ny fiainana any Syria mandritra ny fifandonana mitàm-piadiana eo amin'ireo hery miandàny amin'ny fitondràna ankehitriny, sy ireo mitady ny hanàla azy.
Tsara vintana aho manana pasipaoro Siriana. Hitanao, raha tsy noho ity pasipaoro ity, tsy nisafidy ahy ireo mpanao antsapaka, tampotampoka sady tsatotsatoka, mba hatao fanadihadiana tamin'ireo seranam-piaramanidina rehetra nolalovako.
Raha tsy noho ny pasipaoroko Siriana, nety hoe nandeha tamin'izao nitovy tamin'ireo hafa rehetra aho, na, ny marimarina kokoa, mitovy amin'ny ankamaroany amin'izy ireo. Mety hoe nandeha tsy nahatsikaritra ireo tsy nanam-bitana voatondro hanaovana fanadihadiana aho. Mety hoe nahavita nandeha tany amin'ny toerana tiako haleha amin'ny fandaraham-potoana voaomako mialoha aho.
Eritrereto anie hoe miseho izany e! Ho sahala amin'ny hoe tena zava-dehibe ny fotoanako. Raha izany no mitranga, tena tsy tsikaritro mihitsy ireo tonga avy amin'ireo firenena izay tsy dia manan-danja firy ao amin'ny Fanambaràna Manerantany momba ny Zon'Olombelona.
Raha tsy noho ny pasipaoroko Siriana, tsy naheno ito fehezanteny feno fahalalam-pomba be ito aho: “Afaka miandry etsy an-tsisiny akaikin'ny rindrina ve ianao azafady, Ramatoakely?”, ary tsy nahatadidy ireo fanazasiana tany an-tsekoly tamin'ny fahazazako aho.
Inona ny hanasazian'ny tany tontolo anay? Tsy mieritreritra ve ianareo hoe tokony hosokafana manokana ho anay, Siriana, miaraka amin'ny teny fialantsiny, ireo sisintany rehetra?
“tsy ho tsikaritro akory hoe ahoana no itondràna anay amim-pahalalam-pomba tanteraka, izahay izay ahiahiana, mba hiarovana ny tsy maha olona meloka anay sy hiampangàna fampihorohoroana ; izahay, izay tena kendren'ny fampihorohoroana be kokoa noho ireo manadihady anay momba io.”
Raha tsy noho ny pasipaoroko Siriana, tsy ho tsikaritro akory hoe ahoana no itondràna anay amim-pahalalam-pomba tanteraka, izahay izay ahiahiana, mba hiarovana ny tsy maha-olona meloka anay sy hiampangàna fampihorohoroana ; izahay, izay tena kendren'ny fampihorohoroana be kokoa noho ireo manadihady anay momba io.
Misidina any aminareo anatin'ireo fiaramanidina manokana ny tena fampihorohoroana, ary amin'ireo seram-piaramanidina manokana, aorian'ny famonoany anay mangingina, ary mibahana amin'ireo pejin'ny gazety an-tsoratrareo sy resahan'ny media-nareo mikasika ny fahaiza-misehon'ny vadiny—ilay “Raozin'ny Tany Efitra”.
Ny fahalalam-pombanao, Andriamatoa, mamono ahy bebe kokoa noho ny fanavakavahanao. “Mba afaka ve ianao, azafady….” “Miala tsiny izahay mitazona anao…” “Miala tsiny izahay fa mila mandalo amin'itsy ianao….” Toa maneno toy ireo fitenin'ny lehilahy amin'ny vehivavy tsy tiany izany. “Tsy ianao mihitsy, fa izaho…” Fahalalam-pomba diso tafahoatra hanamamiana ny marina mangidy. Mba hahazoany aina. Alefanareo anaovana fanadihadiana izahay, tsy noho ny heloka hiampangàna fa noho ny maha-izahay anay, kanefa ataonareo amin'ny fahalalam-pomba tanteraka izany.
Tena fifanandrifian-javatra tsotra izao fotsiny hoe nanangana tànana ny antsasak'ireo niandry teo amin'ny efitra fanaovana fanadihadiana rehefa niantso hoe “Mohammed” ny mpanao fanadihadiana. Tena fifanandrifian-javatra tsotra izao, ao anatin'ireo fifanandrifian-javatra hafa maro mitovy amin'izany.
Miala tsiny azafady: mibahana ao an-tsaiko ny fitia te-hamantatra ireo sary. Raha tsy noho ny pasipaoroko Siriana, mety tsy nahafantatra io sary niverimberina io aho—fifandrifian'ny fiverimberenan'ny sary tsotra izao, mazava ho azy.
Mipetraka eto aho ary miandry miaraka amin'ireo ambiny. Namoaka boky amin'ny teny Arabo nosoratan'i Ibrahim Nasrallah aho, Palestiniana iray mpanoratra miresaka ny fanoherana sy ny fitiavana. Tsaroako fony aho mpikatroka mafana fo miady ho an'ny fahalalahana sy demokrasia, mivoaka manao hetsi-panoherana sy nihazakazaka mitady trano fialofana, sady manoratra. Mijery ilay boky eo an-tànako aho. Ankehitriny, ny fitazonako boky amin'ny teny Arabo ao anaty seranam-piaramanidina no hetsika fanoherako lehibe indrindra.
Miala tsiny aho, Andriamatoa, raha toa aho niteny ny fomba tsy mety amin'ny fakànareo am-bavany ireo Siriana. Hitanao, ny sasany aminay efa niaina ny zavatra tena tsy azo saintsainina mihitsy mandritra ireo fakàna am-bavany, noho izany tsy lefaky ny zavatra feno fahalalam-pomba be toy izany izahay. Ny hafa matahotra mafy ireo olona rehetra hitany manao fanamiana ka mamboraka zavatra tsy fantany akory. Noho izany, “marina” toy ny ahoana no tianareo ho azo aminay?
Mangataka ny famelànareo ihany koa aho, tsy fanahy niniako ny hiteny “Tsia” tamim-pireharehàna toy izany, rehefa nangataka ahy hanokatra ny findaiko ianao. Hitanao, manakoako lalina ao an'eritreritray miaraka, amin'ny maha Siriana anay io fangatahana io. Mamerina ahy any amin'ireo toeram-pisavana any amin'ny fireneko io fangatahana io, izay mety hahafaty anao tsotra izao ny fitenenanao tsia amin'ny fangatahana toy izany. Niteny “Tsia” tamim-pireharehàna aho satria te-hifoka kely amin'ny sombintsombin'ny demokrasianareo.
Azonao ve ny dikan'ny hoe antsasaky ny tapitrisa amin'ny vahoakako no maty amin'ny fitadiavana demokrasia? Ny dikan'ny hoe afaka miteny tsia kanefa tsy voavono?
“Hiezaka ny hampiseho endrika mitsikitsiky sy falifaly aho any amin'ny seranam-piaramanidina, fa avelao aho hanome torohevitra kely anao: raha mahita Siriana mitsikitsiky sy falifaly ianao any amin'ny seranam-piaramanidina, amin'izay ianao no tena tokony ho mahimahina.”
Anontanianao ahy ny antony andehanako ao amin'ny firenenao ? Tsy fantatro. Tonga hiresaka momba ny fahafatesana aho. Nilaza izy ireo fa tena mahay miresaka be momba ny fahafatesana aho, hany ka nitehaka ahy mihitsy ny sasany taminareo rehefa tapitra izay nolazaiko. Nahita taolambalon'olona maro aho tany Alep, ary hita ho toa mahay amin'ny resaka famarotana izany amin'ny teny Anglisy.
Ny hanao izany no nahatongavako aty. Mba hijery olona ho namana afaka ho reseko lahatra hoe tsy dia mendrika ny fahafatesana izahay, ary mety hoe, mety fotsiny hoe, henatra ho an'ny olona amin'ny tany tontolo ny fidarohana baomba ny sekoly.
Hitanao tezitra ve aho ? Miala tsiny aho! Mbola tsy voafehiko tsara ireo fombafombanareo. Mahatonga ny olona hiahiahy ny fisehoana ho tezitra, fantatro izany, ary fantatrareo hoe tena be fihetseham-po izahay. Hitanao, tsy mbola nianatra izahay hoe ahoana no tsy dia tokony hanaovana tezitra loatra raha toa ireo drafitra rehetra eto an-tany manampy ny governemantanay midaroka baomba anay andro sy alina. Hiezaka ny hampiseho endrika mitsikitsiky sy falifaly aho any amin'ny seranam-piaramanidina, fa avelao aho hanome torohevitra kely anao: raha mahita Siriana mitsikitsiky sy falifaly ianao any amin'ny seranam-piaramanidina, amin'izay ianao no tena tokony ho mahimahina.
Hitanao ho toy ny sarotsarotiny ve aho? Angamba satria tsy azoko mihitsy hoe no hamalian'ny olona izay “Eny” amin'ny fanontaniana hoe: “Mpikambana amin'ny fikambanana miafina voarara ve ianao?”
Tsia! Tsia! Samy efa noravan'ny fitondranay daholo ireo vondrona am-pilaminana miafina rehetra naha mpikambana ahy, nafindra monina ireo mpikambana tamin'izy ireny ary novonoina tamin'ny fampijaliana ireo tanora. Efa nampiasa basy ve aho? Indray andro, niteny tamin'ny lehilahy iray aho hoe te-handeha hitifitifitra aho mba hamoahako ny hatezerako sasany, fa nanoso-kevitra izy hoe tsaratsara kokoa raha tsy miditra amin'izany izahay, satria mety tsy ho tsara amin'ireo taratasy ofisialy amin'ny maha-Siriana anay izany. Kanefa nandroso izany hevitra izany fotsiny aho satria tena tiako tokoa ilay lehilahy, ary fantatrareo tsara hoe mahatonga antsika hanao zavatra adaladala ny fitiavana. Fa tsy nanana hevitra ny handeha hanakaiky fitaovam-piadiana mihitsy aho tamin'ny fiainako. Tsia Andriamatoa, tsy hampiasa fitaovam-piadiana aho, mankahala fitaovam-piadiana aho, na ireo basy rano aza tsy hahita làlana hankao an-tranoko mihitsy.
Na eo aza izany rehetra izany, tsara vintana aho manana pasipaoro Siriana, satria an'arivony no tsy omena pasipaoro noho ny antony fanapahan-kevitra ara-politika. An-tapitrisany hafa, izay tsy mahafehy loatra ny resaka famarotana ny resaka fahafatesana toa anay, na hoe tsy dia mampientanentana any amin'ny fitsaràna ireo tantarany, ny tsy mahazo “visa” mba handehandeha, noho izany, eny ambony ranomasina izy ireo no mandeha mankaty aminareo. Ny sasany amin'izy ireo maty mba handeha hiampita ho aty aminareo, ka inona izay ora efatra lany ety amin'ny toerana fiandrasana ety amin'ny seranam-piaramanidina raha oharina amin'izany?
Tsara vintana aho manana ny pasipaoroko Siriana. Eritrereto hoe—aorian'ny zavatra rehetra nandalovako, mbola manao nofy ratsy ihany aho hoe very ny pasipaoroko ary mitebiteby fatratra rehefa mifoha avy ao.
Manana fahazarana ratsy misava ny pasipaoroko isaky ny dimy minitra aho rehefa mandeha. Satria raha veriko io, tsy fantatro na hisy amin'ireo sampana iraisam-pirenena miasa loha amin'izany, mety hanampy ahy hahazo indray taratasy hafa fahazoana mandehandeha, amin'ny tranga izay nandavan'ilay zatovolahy Bashar Al-Asaad tsy hanao anay ho toy ireo olom-pirenena ka hanasazy anay tamin'ny fandosirana ny lamboridiny amin'ny fandavana ny hanomezana pasipaoro anay.
Ary tsy te-hanampy ny kirizin'ny mpitsoa-ponenana ao amin'ireo firenenareo aho, hanakana izany anie Andriamanitra.
Tsara vintana aho manana ny pasipaoroko. Afaka averinao amiko ve iny azafady?